Rayson na-anaghị akwa akwa
Rayson na-abụghị akwa akwa na onye na-ebunye ya na China.
P Spunbond Non kpara Fabric
SS Non kpara Fabric
Medical Non kpara Fabric
Agricultural Non kpara Fabric
Frost Protection Uwe
Non kpara ahihia Control Fabric
Non kpara Tablecloth
SMS Non kpara Fabric
Meltblown Non kpara Fabric
Agịga Punch Non kpara Fabric
Spunlace Non kpara Fabric
Ebe ọ bụ na 2007
Rayson emepụtala PP Spunbond Adịji na-abụghị akwa, SS na-enweghị mmasị na akwa, akwa ahụ na-enweghị mmasị, akwa akwa na akwa na-enweghị akwa.
Akwa akwa na-abụghị akwa
Rayson na-agba mbọ na nyocha a na-abụghị nchọpụta, mmepe na mmepụta. Ngwaahịa ya bụ PP na-enweghị akwa, sms na-enweghị akwa, akwa akwa akwa, agịga na-adịghị akwa akwa na akwa a na-ejighị akwa.
BS na-acha anụnụ anụnụ ss anaghị akwa akwa 25gg obosara 175mm maka nkpuchi
Nke aBS na-acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ A na-eji ya maka mkpuchi nke ihe nkpuchi. Nọmalị ọ bụ obosara obosara 255mm. SS na-abụghị akwa akwa dị nro, ume na reprelly. Akwa a na-acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ na-acha uhie uhie na Rayson nwere ike ikwe nkwa ịdị mma.
Mmepụta ọkachamara nke ndị na-ejighị emegharị (mpịakọta) na China
Tebụl na-enweghị atụ, nke a makwaara dị ka akwa tebụl TNT, bụ ezigbo akwụkwọ emere site na ihe polypropylene. A na-eji uru nke ECO-enyi, dị mfe iji, na repyloploth polyplophoth polyploploty polyploplene na ebe a na-eme ihe dị ka prọfes na-enweghị ndị na-ejikọghị ọnụ, tebụl na-enweghị ike Nyefee, TNT Table Tryner, pre-bee tebụl mpịakọta na enweghị poolu ọ bụla.
Akwa / hydrophilic na-enweghị akwa
A na-eji teknụzụ na-enweghị mmasị na teknụzụ SS abụọ. Ị na-ahụ ụdị ngwa a? Offọdụ n'ime njiri mara nke SS na-enweghị akwa akwa bụ iku ume, dị nro, hydrophilic na adịghị emerụ ahụ. A na-eji ụdị a na-eji akwa nke hydrophilic mee ihe nke nkpuchi nke ihe nkpuchi. Rayson bụ ọkachamara na-emepụta ihe eji eme ihe na-enweghị akwa, ya na ọtụtụ afọ nke ahụmịhe bara ụba.
SS na-enweghị ike ịgwọta ụlọ ọgwụ ụlọ ọgwụ
SS na-enweghị mmasị na akwa bụ ihe dị mma maka akwa ụlọ ọgwụ ụlọ ọgwụ, nke e mere maka iji akwa ara, akwa ụlọ ọgwụ, na akwa ụlọ. A na-eme ka akwa ndị a, na-emepụta site na akwa dị larịị, nke pụtara ọ na-enye ngwọta dị mma maka ụlọ ọgwụ ọ bụla.
Ụlọ ọrụ na-abụghị ndị na-abụghị akwa na-ebute akwa na-enweghị akwa na-ebute na China nke nwere afọ 15 nke ahụmịhe na-enweghị mmasị&D. Usoro njikwa zuru oke na ahụmịhe nke bara ụba nwere ike ịgba mbọ hụ na nke ọma
Ndị otu ahịa nwere afọ 15 nke ahụmịhe azụmaahịa mba ụwa nwere ike inye ọrụ ọkachamara n'asụsụ Bekee, Spanish, Italian, na Arabic. A na-ere ngwaahịa anyị ka ihe karịrị mba 40 gburugburu ụwa.
Rayson nwere 10 dị elu na-enweghị akwa na-enweghị atụ, nke nwere ike iwepụta tọn 3,000 akwa akwa na agba dị iche iche kwa ọnwa, yana obosara nke 4.2m. Dydị ngwaahịa a bụ PP na-enweghị mmasị, SMS, SMS, na akwa akwa na-adịghị mma, agịga akwa na-enweghị akwa, ma na-asụ akwa na-enweghị akwa.
Ogologo oge zuru oke nke ihe na-eme ihe n'ụlọ nkwakọba ihe na-eme ka nkwụsi ike nke ọnụahịa ngwaahịa.
Foshan Rayson na-abụghị Croven Co., LTD. A na-eme nzukọ nzukọ US, nke dị na 2007, nke dị na ọdụ ụgbọ elu Foshan dị elu, Honda, CMO na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, nwere mkpuchi dị mgbagwoju anya Mpaghara nke ihe dị ka 80,000 square ma na-arụ ọrụ karịrị narị mmadụ anọ. Companylọ ọrụ ahụ ọpụrụiche na mmepụta nke SpunBond na-abụghị akwa akwa na ngwaahịa na-abụghị nke a na-egbu egbu, yana ihe karịrị pasent 90 nke ngwaahịa ya karịrị mba 30.
Foshan Rayson na-abụghị Croven Co., LTD. Bụ onye na-emepụta oge na-adịghị mma na ụlọ ọrụ na-abụghị nke a na-ejikwa afọ ole na ole. Ọ na-eme ka ọ bụrụ ihe eji eme ihe na-abụghị nke a na-abụghị nke a na-eme, na imepụta ihe dị elu, nke nwere ike ịmepụta akwa na-enweghị akwa, sms, na-enweghị atụ Mepụta oke ibu site na 10GSM ruo 150gs n'ime obosara 4,2m n'ime obosara, yana ego mmepụta kwa afọ na-agụ ihe karịrị 36,000. Companylọ ọrụ ahụ nwere ike ịmepụta akwa na-enweghị mmasị nke ọtụtụ agba dị iche iche na nha, kwesịrị ekwesị maka ọtụtụ ndị dị iche iche.